Hyundai Myanmar Hyundai Sonata My | Hyundai
Hyundai Sonata My
ပြီးပြည့်စုံအောင်သဘာဝကျလှသည်။The All-new Sonata ကသူ့ရဲ့တိုးတက်လှသည့်နည်းပညာများဖြင့်သင့်အတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့မှုကိုအထူးအလေးပေးထားပြီးသင့်ရဲ့စိတ်နှင့်နှလုံးသားအားအပိုင်သိမ်းယူထားသည်။
ယနေ့ခေတ်မှာမောင်းနှင်သူများကစမတ်ကျသောကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုလိုချင်ကြတာကြောင့် Sonata သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကို၎င်းရဲ့ဆက်သွယ်မှုများအဆင်ပြေလွယ်ကူစေနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်ပြန်လည်ဖြေပေးထားသည်။
သင့်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကမည်သို့ပင်ဖြစ်နေပါစေ Sonata က ကားမောင်းနှင်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်မည့်လွတ်လပ်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုတို့အတွက်ကမ္ဘာသစ်တစ်ခု၏တံခါးအားဖွင့်ပေးနိုင်မည့်အကောင်းဆုံးအံဝင်ခွင်ကျအဖြစ်ဆုံးကားတစ်စီးဖြစ်လေသည်။
Sonata ရဲ့မြင့်မားတဲ့စတိုင်ကခံစားချက်များထက်သာလွန်သည်။၎င်းသည် gradient hidden light နည်းပညာကဲ့သို့သောဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်များဖြင့်မြင့်မားသောဆုလာဘ်များကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။Sonata ၏ high-tech ပုံရိပ်ကို LED rear combination lamps များဖြင့်အားဖြည့်ထားပြီး full-LED front lighting ကိုပါရရှိနိုင်သည်။ပိုမိုမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ Hyundai က18-in alloy wheel နှင့် premium Pirelli tires များကိုပါထပ်ပေါင်းထားပြန်သည်။
New Sonata ကိုချဉ်းကပ်၍၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံလှသောမောင်းနှင်ခြင်းအတွေ့အကြုံများအားပိုမိုနီးကပ်စွာရှာဖွေလိုက်ပါ။အမှားဆိုတာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်...သို့သော် Sonata ရဲ့အဆင့်မြင့်ကားမောင်းသူအကူအညီနည်းစနစ်တွေကတော့သင်ပြဿနာမဖြစ်ခင်မှာပင်ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးသင့်ကိုပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့မောင်းနှင်သူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
The new Sonata: ၎င်းသည်သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံလှတဲ့မောင်းနှင်ခြင်းအတွေ့အကြုံများနှင့်နီးကပ်စေပါလိမ့်မယ်။
ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Hyundai ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ၈ ဆက်မြောက်မျိုးဆက် Sonata ဟာ Fluidic Sculpture 2.0 ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုထားလို့ ပိုပြီးသားနားခန့်ညားတဲ့ အသွင်အပြင်၊ ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ ဘော်ဒီတည်ဆောက်ပုံ၊ အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးစနစ်၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပွဲထွက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ ပထမမျိုးဆက်အနေနဲ့ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပေးကတည်းကစလို့ Hyundai Sonata ဟာ စုစုပေါင်း အစီးရေ ၇ သန်းလောက်အထိ ရောင်းချထားပြီးဖြစ်သလို Hyundai ထုတ်ကားတွေထဲမှာဒီလောက်ရောင်းအားကို ရရှိထားတဲ့ တတိယမြောက် Hyundai ကားတစ်စီးဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံးမျိုးဆက် Sonata ကို ၃ နှစ်ကြာဒီဇိုင်းထုတ်ဖန်တီးထားပြီးနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၄၅၀ ဘီလီယံ ဝမ် လောက် ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ Sonata 2020 ဟာ Hyundai ရဲ့ အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်း၊ ဆန်းသစ်မှုတွေနှင့် အရည်အသွေးတို့ကို ဖော်ဆောင်နိုင်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ကားတစ်စီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ 2020 ဒီဇိုင်းသစ်မှာ Electronic Parking Brake, Smart Key & Push-Start Button, Auto Tailgate, Wireless Charger (Phone) တို့အပြင် Multi Infotainment စနစ်ဖြစ်တဲ့ ၈ လက်မ Touchscreen, Bluetooth, Navigation System, Wifi Connetivity, Smart Technology, USB Ports, Android Auto & Apple CarPlay တို့ကို အားဖြည့်တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ယခုအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Sonata 2020 ဟာ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ပေးစွမ်းရုံတင်မကဘဲ ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းအသစ်၊ အတွင်းခန်းအပြင်အဆင်အသစ်၊ နည်းပညာအသစ်တွေနဲ့ ဝယ်သူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာ သေချာပါတယ်။
ယခင်မျိုးဆက်နဲ့လုံးဝခြားနားသွားတဲ့ ခန့်ညားတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ Hyundai Sonata ဟာ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ဆုတွေအမြောက်အမြား ရယူထားတာက သိပ်တော့မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဒီကားဟာ သူ့ရဲ့နည်းပညာမြင့် လုံခြုံရေးစနစ်တွေကြောင့်လည်း ဆုတွေရယူထားနိုင်ပါသေးတယ်။ Sonata ရရှိဖူးတဲ့ဆုတွေထဲက တစ်ချို့ကတော့
The Car Book ကချီးမြှင့်တဲ့ Best Bet ဆု (အမေရိကန်)၊ Kelly Blue Book က ချီးမြှင့်တဲ့ ၂၀၁၆ Best Family Cars ဆု (အမေရိကန်)၊ TOP SAFETY PICK+ (IIHS, အမေရိကန်)၊
Best Economic Performance- full Size Sedan category (Automotive Science Group, အမေရိကန်) ၂၀၁၇ J.D. Power VDS Nameplate Ranking- Midsize Car Segment ဒုတိယဆု (J.D. Power, အမေရိကန်)
5-Star Overall Safety Rating (NHTSA, အမေရိကန်)၊ Highest Overall Safety Rating (NHTSA, အမေရိကန်)
Autoreader (အမေရိကန်) မှ ချီးမြှင့်တဲ့ 10 Best Certified Pre Owned Vehicle For 2019 ဆု၊ Kelly Blue Book (အမေရိကန်) မှ ချီးမြှင့်တဲ့ 10 Best Plug-in Hybrid Cars ဆု၊ IIHS မှ ချီးမြှင့်တဲ့ 2019 Top Safety Pick+ ဆု
ယာဉ်မောင်းစိတ်ကြိုက်စတီယာရင်အလေးအပေါ့နဲ့ ယာဉ်မောင်းနှင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး Normal ၊ Sports နဲ့ Eco ဆိုပြီး မတူတဲ့ မောင်းနှင်မှုပုံစံသုံးမျိုးရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါတယ်။
နောက်ကားမီးထိုးမှုကိုလျှော့ချပေးသော အတွင်းနောက်ကြည့်မှန် (ECM)
ECM နောက်ကြည့်မှန်ဟာ နောက်ကားတွေရဲ့ရှေ့မီးကြီးတွေကြောင့် သင်မျက်စိမစူးစေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ နောက်ကား မီးထိုးတာကို ဒီမှန်က အလိုအလျောက်အာရုံခံပေးပြီး လျှော့ချပေးပါတယ်။
မိုးရွာသွန်းမှုအာရုံခံကိရိယာနှင့် လေခွင်းအားကောင်း ၀ိုက်ပါများ
မိုးရွာသွန်းမှုအာရုံခံကိရိယာက မိုးသည်းမသည်းကို အလိုအလျောက် အာရုံခံပေးသလို လေခွင်းအားကောင်းဝိုက်ပါတွေက ၀ိုက်ပါအမြန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်းပေးပြီး အရှိန်မြင့်ကားမောင်းတဲ့အခါ ၀ိုက်ပါတွေလေနဲ့မြောက်တက်မသွားစေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
အလိုအလျောက် မြူရှင်းစနစ်ကြောင့် မြူထဲမှာပိုပြီး မြင်နိုင်စွမ်းကောင်းစေပါတယ်။ ဒီစနစ်က လေကာမှန်ပေါ်မှာရေငွေ့ရိုက်တာကို အလိုအလျောက် ထောက်လှမ်းပေးပြီး လေကာမှန်ကြည်သွားစေဖို့ ရေငွေ့တွေကိုရှင်းလင်းပေးပါတယ်။
လုံခြုံရေးအပိုင်းမှာ IIHS အဖွဲ့အစည်းရဲ့ Top Safety Pick+ ဆုကိုရယူထားနိုင်တဲ့ All New Sonata မှာ မျှော်မှန်းထားတာထက်ပိုတဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်တွေ တပ်ဆင်ပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Electronic stability control (ESC) စနစ်
ESC စနစ်ဟာ ဘီးလည်ပတ်မှုနဲ့ စတီယာရင်အချိုးအကွေ့ကို အာရုံခံပေးပြီး ရုတ်တရက်ဘရိတ်ဖမ်းပြီးကွေ့ရတဲ့အခါမှာ လမ်းမချော်စေဖို့ အင်ဂျင်၊ ဘရိတ်စနစ်နဲ့ စတီယာရင်ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ဘီးတစ်ဘီးချင်းစီကို အလိုအလျောက် ဘရိတ်ဖမ်းပေးတာကြောင့် လမ်းမချော်စေပဲ သင့်အနေနဲ့ကားကို ဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်စေပါတယ်။
အရှေ့နှင့်အနောက်ပါကင်အထောက်အကူပြု (PAS) စနစ်
တိုက်မိနိုင်စရာတစ်ခုခုအနားရောက်သွားတာနဲ့ အသံပြုသတိပေးမယ့် ကားရဲ့အရှေ့နဲ့အနောက်က အာရုံခံကိရိယာတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ သင်ဟာ ပါကင်ထိုးတာကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အန္တရာယ်ကင်းကင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လေအိတ် (၉) လုံးပါ စနစ်
Sonata မှာ စုစုပေါင်း လေအိတ် (၉) လုံးပါဝင်ပါတယ်။ ရှေ့ခန်းဘေးဘက်လေအိတ်တွေက ရင်ဘတ်ပိုင်းနဲ့ တင်ပဆုံရိုးတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အရှေ့နဲ့အနောက်ဘေးမှန်လေအိတ်တွေကတော့ ဘေးတိုက်ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရင် ဦးခေါင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ရှေ့ခန်းအရှေ့တည့်တည့်က လေအိတ်တွေကတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရင် ဦးခေါင်းနဲ့လည်ပင်းဒဏ်ရာရမှုတွေကို လျှော့ချပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Sonata ကို တရားဝင်ရောင်းချနေတဲ့ Hyundai Showroom မှာ အဖြူ၊ ခဲရောင်နဲ့ အနက် ဆိုပြီး အရောင် ၃ မျိုးနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Sonata 2020 ရဲ့ တရားဝင်စျေးနှုန်းဟာတော့ USD 39,900 ဖြစ်ပြီး ၅ နှစ် (သို့မဟုတ်) ကီလို ၁ သိန်း နှစ်သောင်း အာမခံပေးထားပါတယ်။ အရစ်ကျငွေပေးချေစနစ်နဲ့ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ကနဦးအနေနဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကစပြီး CB ဘဏ်နဲ့ UAB ဘဏ်တို့နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး တစ်နှစ်ကနေ ငါးနှစ်အထိ အရစ်ကျ လစဉ် ငွေပေးသွင်းမှုတွေနဲ့ ဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားသော Customer များ အနေဖြင့်